Nofonjaina Ny Bilaogera Iray Hafa Tao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2017 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, English, English
Ilay mpikatroka Azeri Emin Milli miresaka amin'ny mpanao gazety ao amin'ny Firenena Mikambana ao Geneve, izay nanao fanadihadiana isan-karazany maro momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tao amin'ny firenena .
Tamin'ny 3 Martsa 2017, nahazo sazy roa taona tao Baku noho ny fanendrikendrehana i Mehman Huseynov bilaogeran-dahatsary malaza .
Niantso ny fanapahan-kevitra ho hosoka i Huseynov tao amin'ny fanambarany farany alohan'ny nilazany fa misy olona mankahala ny asany, ary izany no antony nanasaziana azy.
Mpitantana ny pejy Facebook iray malaza i Huseynov izay izarany lahatsary amin'ny lohahevitra maro midadasika miainga any amin'ny fepetran'ny asa mampahonena ka hatrany amin'ny fomba fiainana miliban'ny manampahefana ao amin'ny governemanta sy ny tompon'ny fananana mifaka. Manana mpanjohy maherin'ny 300.000 ny pejiny.
Niantso haingana ny governemanta tsy refesi-mandidy mba hamotsotra ilay tanora bilaogera ireo vondrona mpiaro Zo sy ny mpanara-maso ao Azerbaijan.
Nanagadra 2 taona ilay mpanao tsikera manana fahasahiana miteny #MehmanHuseynov i #Azerbaijan raha tokony hanadihady ny tranga fanamelohana fanararaotana azo tsapai-tànana.
TSY AZO EKENA: bilaogera #Azerbaijan #MehmanHuseynov voaheloka higadra 2 taona noho ny fiampangana diso mikasika ny fanalàm-baraka.
Mihevitra ve ianao @presidentaz fa mety ny managadra sy manasazy ny #MpiaroZonOlombelona … Tsia hoy izahay! Avoahy i #MehmanHuseynov
Mety ho tsaratsara kokoa ny nisamborana an'i Huseynov amin'ny fomba fijerin'ny governemanta. Nisioka ny Foiben'ny fikambanana Mpiaro ny Zon'olombelona ao Geneve fa hamaha ny olana izy ireo amin'ny fivorian'ny Firenena Mikambana faha-34 tohanan'ny Vaomieran'ny Zon'olombelona, ary miantso amin'ny famotsorana azy avy hatrany.
Handray fitenenana 45 minitra izahay ao amin'ny #HRC34, hanao antso ho famotsorana avy hatrany tsy misy fepetra an'i #MehmanHuseynov
Lasa koa ny vavaka iray hafa. Afa-po ve ianao izao?
Nosamborin'ny vondrona polisy manao akanjo sivily tamin'ny 9 Janoary tao afovoan-tanànan'i Baku renivohitr'i Azerbaijan i Huseynov .
Notànana tsy nahazoana vaovao izy nandritra ny alina, voalaza fa noho ny fandikana ny fitsipiky ny didim-pitondrana. Ny ampitson'iny, nasain'ny fitsarana iray nandoa lamandy 200AZN (mihoatra ny 100$ ) izy noho ny fiampangana fa tsy nankatoa ny polisy (Andininy faha-535,1 araka ny Fehezan-dalàna momba ny Heloka ara-pitantanam-panjakana).
Raha niresaka tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fihazonana azy fotoana fohy, nilaza i Huseynov fa nametraka gony teo ambony lohany ny polisy, ary nanao fampiasan-kery nandritra ny fihazonana azy. Tamin'ny 11 Janoary, namoaka ny sarin'i Huseynov mampiseho ny fampijaliana nahazo azy sy ny fitafiany feno rà ny mpisolovavany antsoina hoe Elchin Sadigov .
Raha zava-misy mahazatra ao Azerbaijan ny fisamborana, ny fanapenam-bava, sy ny fandrahonana mpanao gazety, dia i Huseynov no bilaogera voalohany na mpanao gazety nogadrain'ny fitsarana ao Azerbaijan tamin'ny fomba ofisialy noho ny fanendrikendrehana .
Ahitana fiampangana mahazatra toy ny fihazonana zava-mahadomelina (matetika sandoka), fanaovana loham-boto, fanamparam-pahefana, ary tsy fandoavan-ketra ireo raharaham-panamelohana mpanao gazety na bilaogera hafa teo aloha.